News Collection: बलिउड नायकहरूको लेखाजोखा
बलिउड नायकहरूको लेखाजोखा
(दबंग तथा वीर)
सलमान खान बूढो भयो, सलमान खानको समय बित्यो भन्नेहरूलाई 'दबंग' को सफलताले कडा जवाफ दिएको छ । चुलबुल पाण्डेका रूपमा उनले यस्तो दबंगता ( निडरता) देखाए कि दर्शकहरू पुनः उनका प्रशंसक बने । 'दबंग' जस्तो चलचित्रलाई सलमान खानले मात्र चलाउन सक्छन् भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भयो ।
'वीर' को असफलताले सलमानलाई केही चोट पनि पर्‍यो, किनभने यो चलचित्रको कथा उनैले लेखेका हुन् । त्यसो त उनले थप केही चलचित्रमा स-साना भूमिका पनि निर्वाह गरे । सलमान बिग बोसका रूपमा सानो पर्दामा पनि छाइरहे । समग्रमा सलमानलाई वर्ष २०१० फाप्यो ।
(हाउसफुल, खट्टा मीठा, एक्सन रिप्ले तथा तीस मार खाँ)
अघिल्लो वर्षदेखि असफल हुन थालेका अक्षय कुमारले त्यो क्रमलाई वर्ष २०१० मा पनि जारी राखे । उनले अभिनय गरेको चलचित्र खट्टा मीठाले दर्शकलाई तीतो स्वाद दियो भने एक्सन रिप्लेलाई दर्शकले फास्ट फरवार्ड गरिदिए । हाउसफुलको सफलता पनि चित्तबुझ्दो भएन । वर्षको अन्त्यमा प्रदर्शनमा आएको तीस मार खाँ बाट भने उनी आशावादी छन् ।
(दुल्हा मिल गया, माई नेम इज खान)
'माई नेम इज खान' ले देश-विदेशमा सफलताको झन्डा गाड्दै किङ खानको साम्राज्यलाई कायम राख्यो । त्यसो त उनी अन्य नायकभन्दा धेरै पछाडि छैनन् । अभिनयबाहेकका प्रसंगमा बढी व्यस्त भएर होला, शाहरुखले चलचित्रलाई पर्याप्त समय दिन पाएका छैनन् । २०११ उनका लागि निकै महत्वपूर्ण हुनेछ, किनभने यो वर्ष उनका 'र-वन' तथा 'डन टु' जस्ता ठूला चलचित्र प्रदर्शन हुँदैछन् ।
(रण तथा तीन पत्ती)
रण तथा तीन पत्ती हेरिसकेपछि दर्शकहरूले नै सोध्न थालेका छन्, आखिर अमिताभले यस्ता चलचित्रमा किन अभिनय गर्नुपर्‍यो ? 'कौन बनेगा करोडपति' मार्फत अमिताभ सानो पर्दामा छाउनुलाई चाहिं सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । विज्ञापन, ब्लग तथा टि्वीटरमार्फत उनले आफूलाई चर्चामा राखिरहे ।
(राजनीति, अंजाना अंजानी)
भविष्यका सुपरस्टार रणवीर कपुरले 'राजनीति' मा आफ्नो छविभन्दा पृथक् भूमिका निर्वाह गरे । थुप्रै कलाकारको भीडमा उनी आफ्नो उपस्थिति दर्साउन सफल भए । अन्जाना अन्जानी असफल भएकोमा उनलाई दुःख छ, तर यो चलचित्र नै यति बढी नराम्रो थियो कि चार जना रणवीरले पनि त्यसलाई बचाउन सक्दैनथे ।
(रावण तथा खेलें हम जी जान से)
यसअघि मुख खोल्न नसकेकाहरूले यसपटक सोझै भनिदिए, यदि जुनियर बच्चन अमिताभका छोरा नभएका भए चलचित्र उद्योगबाट धेरै अघि नै रिटायर भैसक्थे । हुन पनि उनका चलचित्र नराम्रोसँग फ्लप भए । 'रावण' लाई न त मणिरत्नमले बचाए न त ऐश्वर्याले नै । 'खेलें हम जी जान से' लाई त पहिलो हप्ता बिताउनै गाह्रो पर्‍यो ।
(आशाएँ तथा झूठा ही सही)
यी दुवै चलचित्र चलेनन् । जोनले आफ्नो इमेज सुपरस्टारको झैं बनाए पनि वास्तविकता अर्कै भयो । आशाएँ तथा झूठा ही सहीका निर्माताहरूसँग सोध्ने हो भने उनीहरूले जोनको वास्तविकता बताइदिन्छन् । आशाएँ निराशामा बदलियो भने झूठा ही सहीले जोनको स्टारडमको वास्तविक तस्बिर पेस गर्‍यो ।
(तीन पत्ती, अतिथि तुम कब जाओगे, राजनीति, वन्स अपन ए टाइम इन मुम्बई, आक्रोश, गोलमाल-३, टूनपुर का सुपरहीरो)
निःसन्देह अजय देवगण वर्ष २०१० का सुपरस्टार हुन् । भिन्न चलचित्रमा भिन्न-भिन्न भूमिका निर्वाह गरेर एकातिर उनले आफ्नो अभिनय क्षमता सावित गरेका छन् भने अर्कातिर यी चलचित्रको सफलताले उनलाई क्षमतावान स्टार बनाइदिएको छ । गोलमाल-३ तथा अतिथि तुम कब जाओगेमार्फत उनले दर्शकलाई हँसाएका छन् भने राजनीतिमा उनी कुशल राजनीतिक खेलाडी सावित भएका छन् । वन्स अपन ए टाइम इन मुम्बई मा हाजी मस्तानको चरित्रलाई उनले जीवन्त बनाएका छन् । अजय प्रचार-प्रसारबिना नै आफ्नो सफलताको झन्डा गाड्न सफल भएका छन् ।
(चान्स पे डान्स, पाठशाला, बदमाश कम्पनी, मिलेंगे-मिलेंगे)
अघिल्लो वर्ष 'कमीनापन' देखाउने शाहिद कपुर यो वर्ष खासै चर्चामा आएनन् । उनी अध्यापक बने, डान्स सिकाए, बदमास बनेर कम्पनी चलाए र मिलेंगे--मिलेंगेमा पूर्व प्रेमिका करीनासँग कम्मर मर्काए तर नतिजा राम्रो आएन । डराएर उनले बुवा पंकज कपुरको औंला समाए, जो अहिले शाहिदलाई लिएर 'मौसम' बनाइरहेका छन् ।
(काइट्स तथा गुजारिस)
काइट्सको धागो यसरी काटियो कि ऋतिक अहिले पनि राम्रोसँग निदाउन सकेका छैनन् । जुन चलचित्रका लागि उनले आफ्नो सबै कुरा दाउमा लगाएका थिए, त्यही चलचित्र असफल हुन्छ भन्ने उनले सोचेकै थिएनन् । 'गुजारिस' मा उनले राम्रो अभिनय गरेका छन्, प्रशंसा पनि पाए, तर ऋतिकलाई त्यती बेला खुसी मिल्थ्यो जब यो चलचित्र सफल हुन्थ्यो ।
(लफंगे परिंदे तथा तेरा क्या होगा जोनी)
लफंगा बनेर सफलताको स्वाद चाख्ने नीलको सपना चकनाचुर भयो । नीलमा अझै पनि प्रशस्त संभावना देखिन्छ, तर आवश्यकता छ एउटा सफल चलचित्रको, जुन वर्ष २०११ मा मिल्छ कि ?
(वन्स अपन ए टाइम इन मुम्बई, क्रूकः इट्स गुड टू बी ब्याड )
वन्स अपन ए टाइम इन मुम्बईको सफलतामार्फत इमरानले के कुरा प्रमाणित गरेका छन् भने उनी भट्ट दाजुभाइबिना पनि राम्रो अभिनय गर्न सक्छन् र सफल पनि हुन्छन् । 'क्रुक’ मा उनले पुरानै ढर्रा देखाए, चुम्बनको आदान-प्रदान गरे तर दर्शकले त्यसलाई नकार्दै के सन्देश दिए भने अब यी सबै कुरा पुराना भैसकेका छन् ।